रुकुम ताक्नु भनेकाे तातो खरानीमा खुट्टा हाल्नु सरह : सांसद रोका - Naya Patrika
रुकुम ताक्नु भनेकाे तातो खरानीमा खुट्टा हाल्नु सरह : सांसद रोका
दाङ | भदौ २६, २०७५
पूर्वी रुकुमकी प्रतिनिधि सभा सदस्य कमला रोकाले नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन गराएर सांसद बनाउने कुरा निराधार भएको बताइन् । उनले रुकुम ताक्नु भनेका तातो खरानीमा खुट्टा हाल्नु सरह भएकाे बताइन् । गौतमलाई डोल्पाबाट सांसद बनाउने योजना असफल भएसँगै पूर्वी रुकुम वा प्युठानबाट उम्मेदवार बनाउने चर्चाकाे उनले खण्डन गरेकी हुन् ।
दाङको घोराहीमा नयाँ पत्रिकासँग सांसद रोकाले पार्टीको निर्णय आफैमा जनमतकाे अपमान हुने भएकाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान कसिन् । ‘सांसद पद पार्टीले चुनेको हैन, मन लाग्दा फेरबदल गर्नलाई ।’ उनले भनिन्, ‘जनताले जनपक्षीय काम गर्न दुई तिहाई मत दिएका हुन् । जनमत अपमान हुने गरी पार्टीकाे यस्ता निर्णय रत्तिभर विश्वास छैन ।’
‘यदि पार्टीले मलाई हटाउने निर्णय गरे कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिदैन,’ सांसद रोकाले भनिन् । निर्वाचनमा हार भएसँगै गौतमलाई बर्दियाका जनताले दिएको मत स्मरण गराउँदै उनले त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्न सुझाव दिइन् ।
‘कस्को कति आवश्यक भन्ने जनताले फैसला गर्ने हो । बर्दियाका जनताले उहाँलाई त्यति धेरै मत दिएका छन्, निर्वाचनमा हारजित प्राविधिक हो ।’ सांसल रोकाले भनिन्, ‘जनताको राजनीति गर्नेले अपमान हुने गरी निर्णयतर्फ सोच्नु हुँदैन ।’
सांसद राेकासँगकाे छाेटाे अन्तर्वार्ता
पार्टी नेता बामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट निर्वाचन उठाउने योजना सफल नभएपछि विकल्पका रुपमा तपार्इकाे निर्वाचन क्षेत्र (पूर्वी रुकुम)बाट उम्मेदवार बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ । तपाईले जानकारी पाउनुभयाे ?
काठमाडौँबाट आफ्ना मतदाता भेटघाटका लागि रुकुम जाने क्रममा बुटवल आइसकेपछि यसबारे मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए । आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म पनि पार्टीका तर्फबाट मलाई कुनै जानकारी आएको छैन । र यसबारेमा छलफल भएको होला जस्तो लाग्दैन ।
खबर पाएपछि कत्तिको तनाव महशुस गर्नुभएको छ ?
तनाव महशुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो अनावश्यक कुरामा टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन् । मैले यसअघि नै भने यो बारेमा कुनै छलफल भएको होला भन्ने मलाई कति पनि विश्वास छैन ।
शिर्षस्थ तहमा छलफल भइरहेको चर्चा छ । आधिकारिक निर्णय भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
यस्तो निर्णय कुनै पनि हालतमा होला जस्तो मलाई लाग्दैन । जनमतको अपमान हुने गरी पार्टीले निर्णय गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले पार्टीलाई जनमतको अपमान हुने गरी यस्तो अनावश्यक निर्णय गर्न मत दिएका हैनन् । र निर्णय भइहाले पनि मैले जनमतको अपमान हुने गरी राजीनामा दिने कुरा हुँदैन ।
अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय नभएको भएर तपाईले ढुक्क भएर अस्विकार गरिरहनु भएको छ तर, भइहाल्यो भने के पार्टी निर्णय विपरित जानुहुन्छ त ?
डोल्पामा धनबहादुर जीलाई पनि जनताले दबाब दिएपछि उहाँले राजिनामा दिन अस्विकार गर्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । मुख्य कुरा जनमतको नै हो । सांसद पद पार्टीले चुनेको हैन, पार्टीले चाहने वित्तिकै फेरबदल गर्न सकियोस् । यहाँ जनमतको सवाल छ । कथमकदाचित पार्टीले निर्णय गरिहाले पनि पूर्वी रुकुमका जनताले स्विकार्ने कुरा हुँदैन । जनताले नस्विकारेपछि म जनप्रतिनिधिले पार्टीले निर्णय गरिहाले पनि स्विकार्ने कुरा हुँदैन ।
बामदेवलाई सांसद बनाउन यति धेरै रस्साकस्सी शिर्ष तहमा किन भइरहेको छ ?
बामदेव जीले बर्दियाका जनताको मतको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । उहाँले निर्वाचन हारेको भएपनि त्यति धेरै जनताले उहाँलाई मत दिएका छन् । निर्वाचनमा हारजित हुन स्वाभाविक हो । उहाँले पाएको मतको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । जनताको राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको निर्णय स्विकार्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । कस्को आवश्यक्ता कति भन्ने कुरा जनताले फैसला गर्ने हो । उहाँ सांसद हुनैपर्ने थियो भने बर्दियाका जनताले उहाँलाइ किन जिताएनन् ? त्यसैले मेरो एउटै सुझाव छ — अब अन्यत्रबाट निर्वाचनमा उठेर सांसद बन्ने सोच त्याग्नुस् । बर्दिया र अन्य स्थानका जनमतको अपमान नगर्नुस् ।
#खुटा #तातो खरानी #रुकुम ताक्नु